ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့မှာ မေတ္တာပို့ ပရိတ်ရွတ်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် – Online News Post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ရှေ့မှာ မေတ္တာပို့ ပရိတ်ရွတ်နေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်
ပြည်သူ ချစ် မင်းသမီး ချောလေး ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် က တော့ ပရိသတ်တွေ အားပေး ရကျိုး နပ်လောက်အောင် ယခုလို အချိန် မျိုးမှာ ပြည်သူနဲ့ အတူ တစ်ဘက်တည်း ရပ်တည် နေတာဖြစ် ပါ တယ် ။ သင်ဇာဝင့်ကျော် က အခုလို အခြေ အနေမှာတော့ နေ့တိုင်းလမ်း ပေါ်ထွက်ပြီး လူထု လှုပ်ရှားမှု တွေမှာ အားတက် သရော ပါဝင်နေ တာဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒါ့အပြင် သူမကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ် တွေ နဲ့ လမ်းပေါ်တွေတဲ့ အခါမှာ လည်း ရင်းရင်း နှီးနှီး နှုတ်ဆက်ပြီး ဖော်ရွေစွာ ပြုံးပြတာ ဖြစ်ပါတယ် နော် … . သင်ဇာ က တော့ ပြည်သူ တွေနဲ့ တစ်စိတ် တစ်ဝမ်း တည်းရှိပြီး တတ်နိုင် တဲ့ဘက် ကနေပါဝင်နေ တာဖြစ်ပါ တယ် … .
သင်ဇာဝင့်ကျော် တို့အုပ်စု ကလည်း ပြည်သူ လူထု အတွက် စားစရာတွေနဲ့ ရေသန့်ဘူး တွေကို တစ်နိုင် တစ်ပိုင် လှူဒါန်းလိုက်သေး တာဖြစ်ပါ တယ် ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က တော့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီး ကိုင်ပြီး လူအုပ်ကြား ထဲမှာ ရဲရင့်ပြတ်သားစွာ နဲ့သူမခံယူချက် ကို နေ့စဉ် ရက်ဆက် ထုတ်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြည်သူလူထုကလည်း အနုပညာရှင် တွေကအခုလို မျိုးတက်တက်ကြွကြွနဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေဦးဆောင်နေကြလို့ ပိုပြီးအားတက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေကတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ မမောမပန်း နိုင်ဘဲ နေ့တိုင်းလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီ နေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆)ရက် နေ့ မနက်ပိုင်းမှာတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရန်ကုန်မြို့၊တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နေအိမ်ရှေ့သို့ သွားရောက်ပြီး ပရိတ်ရွတ်၊မေတ္တာပို့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဇာတို့ကတော့ မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အကူအညီလေးတစ်ခုခု ရလိုရငြားနဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မနက်စောစောမှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့ ကုသိုလ်၊ကောင်းမှူတွေပြုလုပ်နေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော် … .
source & photo credit : Myanmarload TV
ျပည္သူ ခ်စ္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ျဖစ္တဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က ေတာ့ ပရိသတ္ေတြ အားေပး ရက်ိဳး နပ္ေလာက္ေအာင္ ယခုလို အခ်ိန္ မ်ိဳးမွာ ျပည္သူနဲ႔ အတူ တစ္ဘက္တည္း ရပ္တည္ ေနတာျဖစ္ ပါ တယ္ ။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ က အခုလို အေၿခ အေနမွာေတာ့ ေန႔တိုင္းလမ္း ေပၚထြက္ၿပီး လူထု လႈပ္ရွားမႈ ေတြမွာ အားတက္ သေရာ ပါဝင္ေန တာျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒါ့အျပင္ သူမကို ခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ ေတြ နဲ႔ လမ္းေပၚေတြတဲ့ အခါမွာ လည္း ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၿပီး ေဖာ္ေရြစြာ ျပဳံးျပတာ ျဖစ္ပါတယ္ ေနာ္ … . သင္ဇာ က ေတာ့ ျပည္သူ ေတြနဲ႔ တစ္စိတ္ တစ္ဝမ္း တည္းရွိၿပီး တတ္နိုင္ တဲ့ဘက္ ကေနပါဝင္ေန တာျဖစ္ပါ တယ္ … .
သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ တို႔အုပ္စု ကလည္း ျပည္သူ လူထု အတြက္ စားစရာေတြနဲ႔ ေရသန႔္ဘူး ေတြကို တစ္နိုင္ တစ္ပိုင္ လႉဒါန္းလိုက္ေသး တာျဖစ္ပါ တယ္ ။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က ေတာ့ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီး ကိုင္ၿပီး လူအုပ္ၾကား ထဲမွာ ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ နဲ႔သူမခံယူခ်က္ ကို ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ ထုတ္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ျပည္သူလူထုကလည္း အႏုပညာရွင္ ေတြကအခုလို မ်ိဳးတက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ ေရွ႕ဆုံးကေနဦးေဆာင္ေနၾကလို႔ ပိုၿပီးအားတက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အႏုပညာရွင္ေတြကေတာ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ မေမာမပန္း နိုင္ဘဲ ေန႔တိုင္းလမ္းေပၚထြက္ၿပီးလႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ဒီ ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၆)ရက္ ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းေပၚမွာရွိတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ့ ေနအိမ္ေရွ႕သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပရိတ္ရြတ္၊ေမတၱာပို႔ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။သင္ဇာတို႔ကေတာ့ မိမိတတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန အကူအညီေလးတစ္ခုခု ရလိုရျငားနဲ႔ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ေစာေစာမွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာနဲ႔ ကုသိုလ္၊ေကာင္းမႉေတြျပဳလုပ္ေနတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္ … .
Previous post ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ Rဇာနည်တို့ ဂီတအနုပညာရှင်လောကသားများ
Next post ၂ ငါးလုံးရေးတော်ပုံကြီးကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ ရဲဝင့်စွာနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ရပ်တည်ချက်